“कालो ढुसी” धेरै मात्रा मा संक्रमित थपिदै – कारण के हो ? | Naya News Nepal
Home समाचार “कालो ढुसी” धेरै मात्रा मा संक्रमित थपिदै – कारण के हो ?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १८:४७
काठमाडौं जेष्ठ २४
कोरोना बिरामी हरुमा देखिने रोग कालो ढुसी, पछिल्लो समय प्राणघातक बन्दै गएको ‘कालो ढुसी’को संक्रमण तुलनात्मक रुपमा धेरै देखिएको छ । नेपालमा पनि कालो ढुसीको संक्रमणबाट जेठ २० गते एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कम्तीमा १२ जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कालो ढुसीबाट संक्रमित हुनेको संख्या करिब १२ हजार पुगेको छ । यसबाट संक्रमित हुनेमध्ये अधिकांश मानिसहरु कोरोनाबाट हालै मात्र निको भएका मानिसहरु छन् । यति धेरै मानिसमा कालो ढुसीको संक्रमण देखिनुलाई असामान्य मानिएको छ । यो संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५० प्रतिशत रहेको छ । चिकित्सा क्षेत्रका केही जानकारहरुका अनुसार भारतमा मधुमेह भएका मानिसको संख्या ठूलो भएकाले उनीहरुमा कालो ढुसीको संक्रमण बढेको हो । तर यो संक्रमणको लागि मधुमेह मात्र कारण भने होइन । यहाँ कालो ढुसी संक्रमणको विषयमा केही जानकारी उल्लेख गरिएको छ स्
म्यानचेस्टर युनिभर्सिटीका ढुसीको संक्रमण विशेषज्ञ डा। डेभिड भारतमा कोरोना महामारी आउनुभन्दा पहिला नै कालो ढुसीको संक्रमण अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म्युकर्माइकोसिस धेरै हदसम्म अनियन्त्रित मधुमेहसँग जोडिएको छ र भारतमा यस्ता बिरामी धेरै छन् ।’
विश्वभर गरिएको एक अध्ययनमा कोरोनाको संक्रमणबाट निको भएका र ढुसीको संक्रमण पनि देखिएकामध्ये ९४ प्रतिशत मानिस मधुमेहबाट पीडित थिए । उनीहरुमध्ये ७१ प्रतिशत भारतीय थिए । भारतका साथै अन्य केही मधुमेहका बिरामीको संख्या धेरै भएका मुलुकमा पनि कालो ढुसीको संक्रमण बढेको देखिएको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि मधुमेहका बिरामीको संख्या धेरै छ तर यी मुलुकमा म्युकर्माइकोसिसका संक्रमितको संख्या भने धेरै छैन ।
जानकारहरुका अनुसार विशेषगरी धेरै मानिसलाई आफूलाई मधुमेहको समस्या छ भन्ने कुरा थाहा नभएकाले पनि समस्या बढेको छ । आईडीएफले गरेको एक अनुमानमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा करिब ५७ प्रतिशत मानिसलाई मधुमेहको बारेमा जानकारी नहुने पाइएको थियो । यसमध्ये पनि पाकिस्तानमा यस्ता मानिसको संख्या धेरै हुन सक्ने अनुमान छ । किर्गिस्तानको इन्टरनेशनल स्कुल अफ मेडिसिनका डा। हरिप्रसाद प्रकाश भन्छन्, ‘भारतमा ठूलो संख्यामा अनियन्त्रित मधुमेहका बिरामी छन्, किनकि मानिसहरु नियमित रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्दैनन् ।’
उनका अनुसार मधुमेहको समस्या अन्य रोगको परीक्षण गर्दा फेला पर्छ । साथै यसको उपचार पनि गराइँदैन । मधुमेहलाई नियन्त्रणमा नराख्दा धेरै किसिमको संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । जसमध्येको एउटा ढुसीको संक्रमण पनि हो । अफ्रिकी मुलुकमा पनि मधुमेहको समस्या पत्ता नलागेका मानिसको संख्या ६० प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तर, संख्याको हिसाबमा भने यहाँ म्युकर्माइकोसिसका केवल तीन प्रतिशत संक्रमित फेला परेका छन् ।
डा। डेनिङ भन्छन्, ‘यसको कारण म्युकर्माइकोसिसका संक्रमित फेला नपरेका पनि हुन सक्छन् । यसको पहिचान गर्ने काम पनि सजिलो छैन ।’ नमुना संकलनमा हुने कठिनाइ र डाइग्नोस्टिक टेस्टको संवेदनशीलताको कमीको कारण कालो ढुसी पहिचान गर्न कठिन हुन्छ ।
Previous articleदेशभर ४,४७२ जना संक्रमित थपिए, ६९५१ जना निको
Next articleभिटामिन ‘डी’को जथाभावी प्रयोग नगर्न चिकित्सकको सुझाब , पत्थरीदेखि मिर्गौला ड्यामेज गराउने चेतावनी !!
पोखरीमा डुबेर ५ बालक को मृत्यु
बौद्धमा बोराभित्र काेचेर फालिएकाे अवस्थामा मानिसको खु,ट्टा भेटियाे,